साधारण रूसी प्रवेशकों लागि अक्सफोर्ड को कुलीन लागि जादुई संस्था, वही मुसीबत कुरा, एक पनि भन्न सक्छ छ। सुन्दर पुरानो भवन, हरियो lawns, राज बस्त्र मा विद्यार्थी, बुद्धिमान् प्रोफेसर, धनी पुस्तकालय - यो सबै तरिका टाढा र काल्पनिक देखिन्छ। एक हात मा, यो विश्वविद्यालय प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो छ किनभने साँचो छ, तर तपाईं हरेक प्रयास बनाउन भने, यसलाई आफ्नो कदर सपना महसुस गर्न सम्भव छ - अक्सफोर्ड मा शिक्षित गर्न।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हुनत जग को सही मिति अज्ञात छ, यसलाई पहिलो उल्लेख 1096 मा कागजातहरू मा छ पाइने पुरानो शैक्षिक संस्थाहरू मध्ये एक हो। यो पहिलो भिक्षुहरूले सिकेका र मध्य युग मा - उच्च समाज सदस्य, ती दिनमा रूपमा, शिक्षा सबै आचरण लागि अनिवार्य थियो। आज अक्सफोर्ड, युवा व्यवसायि, आत्म-विश्वस्त उत्पादन आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम छन् जो आफ्नै लायक छ, थाह छ।
प्रमुख कम्पनीहरु मा नेतृत्व स्थितिहरू यो विश्वविद्यालय को स्नातक। तिनीहरूले ओक्सफोर्ड मा प्रशिक्षित थिए भने, त्यसपछि, सक्षम तरिका कुनै पनि अवस्था बाहिर चाँडै नयाँ ठाउँमा अनुकूल, केही जिम्मेवारी मा स्विच गर्न पाउन किनभने तिनीहरूले सबैभन्दा जिम्मेवार काम विश्वसनीय। यी मानिसहरु र सफल कम्पनीहरु आवश्यक छ। त्यसैले, यो त धेरै सपना यो विश्वविद्यालय को विद्यार्थीहरूको बाँध्न मा प्राप्त गर्न किन अनुमान गर्न गाह्रो छैन। अक्सफोर्ड मा के गर्न?
निस्सन्देह, यो आवेदक अंग्रेजी पोख्त हुनुपर्छ, तर यो ज्ञान तपाईँलाई प्राप्त सुनिश्चित गर्न पर्याप्त छैन। प्रतियोगिता धेरै ठूलो छ, त्यसैले सबैले विश्वविद्यालय शिक्षकहरूको कठोर चयन बित्दै। तपाईं अक्सफोर्ड जाने अघि, तपाईं उच्च गुणस्तरीय प्रशिक्षण मार्फत जान आवश्यक छ। यसलाई सुरु गर्न राम्रो छ को वरिष्ठ कक्षाहरू विश्वविद्यालय गर्न परीक्षाहरू अघि वर्ष को एक जोडी को लागि विद्यालय। आदर्श - ग्रेट ब्रिटेन को प्रतिष्ठित विद्यालय मध्ये प्रशिक्षण।
को अंग्रेजी भाषा को ज्ञान मा तीन परीक्षाहरू को आत्मसमर्पण evidencing प्रमाणपत्रहरू को अधिग्रहण को हेरचाह गर्न पूर्व-आवश्यकता। को गर्मी केन्द्र मध्ये विदेशी विद्यार्थीहरूको विशेष प्रशिक्षण undergo गर्न, हस्तक्षेप छैन। यदि सम्भव छ भने, यो ग्रेट ब्रिटेन को प्रतिष्ठित विद्यालय एक अनुवाद गर्नुपर्छ। प्रदर्शन मूल्यांकन सबै विषयहरुमा बारे मा भूल छैन रूपमा उच्च हुनुपर्छ। भविष्यमा व्यापार गर्न यो दृष्टिकोण ओक्सफोर्ड मा के भन्दा पहेली छैन, विश्वविद्यालय को विशिष्ट विद्यार्थीहरूको बाँध्न सामेल हुनेछ।
एउटा चिठी लेख्न र विश्वविद्यालय यसलाई पठाउन तपाईंलाई एउटा विशेष रूप मा आवश्यक पहिलो कुरा। सकारात्मक प्रतिक्रिया निम्न तपाईं परीक्षण र अक्सफोर्ड को प्राध्यापकहरू संग एक साक्षात्कार लिनु आवश्यक छ। तपाईं आफ्नो सबै ज्ञान र सीप देखाउन आवश्यक, विश्वविद्यालय विद्यार्थीहरू इच्छुक हुनुपर्छ। बाहिर खडा गर्न, तपाईं हामीलाई आफ्नो शैक्षिक वा पुष्ट उपलब्धिहरू बारेमा बताउन सक्छ।
चयन समिति ठीक यस अवधिमा कागजातहरू पूर्ण प्याकेज प्रदान गर्न आवश्यक छ। यसलाई आफ्नो सम्पर्क जानकारी छोड्न उहाँले विद्यार्थी सम्पर्क र त्यसको निर्णय सूचित सकून् भनेर आवश्यक छ। त्यो अक्सफोर्ड मा के सबै सल्लाह छ, पूरा भयो। भर्ना भएपछि, तपाईं मात्र एक भिसा प्राप्त गर्न सक्छन्, र मन को शान्ति संग बेलायत मा अध्ययन गर्न जाने।
कसरी अर्को शहर मा एक विश्वविद्यालय मा भर्ना लागि लागू गर्न?
को "टेली 2" रूपमा महसुल योजना र अतिरिक्त विकल्प यातायात ब्यालेन्स सिक्न
विवरण र nuances - छोडपत्र लागि कसरी फाइल
प्यानकेकहरू सूजी: चरण व्यञ्जनहरु द्वारा चरण संग खाना पकाउने प्रविधी
रेल Sarbayev: जीवनी र फोटो
"हरिण" वा "चल्ला": नाम लेआ को अर्थ?